“အမေ”ဆိုသောစကားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ကြားနေရယုံနှင့် လွန်စွာချိုမြိန်နွေးထွေးစေပါသည်။ ထိုအပေါ်တွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကြင်နာမူနှင့် မျှော်လင့်ချက် မည်မျှထားရှိထားပါသနည်း။
ယနေ့ခေတ်တွင် များစွာသော မက်ဆေ့ချ်ပို့အပ်စ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့နေ့ထိုင်ရာဘဝကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် များစွာအထောက်အပံ့ပြုပါသည်။ အင်တာနက်၏ကျေးဇူးကြောင့် မက်ဆေ့ချ်များကို စက္ကန့် အတွင်း ပို့ဆောင်၍ရနေပါသည်။ သို့သော် အင်တာနက်ရရန် အခက်ခဲဖြစ်နေခဲ့လျှင် ဥပမာ
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျွန်တော်တို့ ချစ်ရသောသူတို့၏ လုံခြုံမူကို အမြဲစိတ်မချဖြစ်ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်များအတွက် ပို၍စိတ်ပူရတတ်ပါသည်။ အချိန်ပြည့် ဖုန်းခေါ်ဆက်သွယ်နိုင်သော်လည်း အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်ခါတွင် မိမိချစ်ခင်ရသော မိသားစုနှင့် သူငယ်ခြင်းတို့၏ ရောက်တည်ရာနေရာကို
နှစ်ဟောင်းက အဆိုးတွေ အကုန်ပျောက်ပြီး နှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်လူသစ် ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။ နှစ်သစ်မင်္ဂလာ လူသားများအားလုံး နှင့် သတ္တာဝါများအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။ နှစ်သစ်မင်္ဂလာ အခါတွင် Zapya Fan မိတ်ဟောင်း၊မိတ်သစ်
တေးသီချင်းများကို လိုင်းဖွင့်ပြီးနားထောင်ခြင်းကို သင်ငြီးငွေ့နေလား? လိုင်းဖွင့်သီးချင်းနားထောင်ခြင်းက သင်၏မိုဘိုင်း‌‌ဒေတာကိုပိုမိုကုန်ကျစေပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်သီချင်းများကို မူပိုင်ခွင့်ရှိထားသူတစ်ဦး အနေဖြင့် အောဖ်လိုင်းတေးဂီတဖွင့် Application သည်ပို၍သင့်လျှော်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုခေတ်ခါမှာ အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဖိုင်များကို online sharing ပြုလုပ်ခြင်းကို အားလုံးနှင့် ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖိုင်များကို တစ်နေရာတည်း sharing
Zapya ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့ update လုပ်လိုက်ပါ
Zapya အပ်ဒိတ်အသစ် ယခုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာပါရစေ။ 6.2 ဗားရှင်းသည် Android App Bundle (အတိုကောက် AAB) လို့ခေါ်တဲ့ ပေါ်တာ သိပ်မကြာသေးတဲ့ format ဖြစ်ပြီး Android အပလီကေးရှင်းများ လွှဲပြောင်းခြင်းကို
By dewmobile / 2022-03-03
အသံဖိုင်ကို စာသားအဖြစ် လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောင်းနိုင်ခြင်း
အသံဖိုင်ကို စာသားပြောင်းချင်တဲ့အခါ အသံအရင်နားထောင်ပြီး စာပြန်ရိုက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုး မိတ်ဆွေတို့ အရင်က ကြုံခဲ့ဖူးလား? ကြုံဖူးတဲ့သူဆိုရင် အချိန်ကုန်၊ အလုပ်ရှုပ်တာကို ကောင်းကောင်းသိကြမှာပါ။
By dewmobile / 2022-02-18
သင်၏ iOS စက် မှ PC သို့ backup လုပ်ပါ။
မိတ်ဆွေရဲ့ iOS စက်ပစ္စည်း ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း၊ ပြုတ်ကျခြင်း (သို့) ရပ်တန့်သွားခြင်းများ ဖြစ်ဖူးပါသလား။ ပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားတဲ့ဖုန်းထဲက ဖိုင်တွေ PC မှာ အရန်သိမ်းဖို့ မေ့သွားတဲ့အတွက် စိတ်ပျက်ပြီး
By dewmobile / 2022-01-29